म्यारोडोनालाई सम्झँदै मेसीले भने,'म्याराडोनासँगको सुन्दर पलहरु सम्हालेर राख्छु' | Diyopost
काठमाडौं । चर्चित फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको ६० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अर्जेन्टिनाको भूतपूर्व मिडफिल्डर एवं प्रबन्धक समेत रहेका म्याराडोनाको नोभेम्बरको सुरुमा ब्रेन ब्लड क्लोटको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
उनको सम्झनामा अर्का फूटबलर लियोनल मेसीले भावुक स्ट्याटस लेखेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल इन्स्ट्राग्राममा मेसीले लेखेका छन्,‘सबै अर्जेन्टिनी र फुटबलको लागि ज्यादै आज निकै दुखको दिन हो । उनले हामीलाई छोडेर गए तर हामीबाट टाढा भएका छैनन् । किनकी डिएगो म्याराडोना शास्वत हुन् । म उहाँसँगका सबै सुन्दर क्षणहरु सम्हालेर राख्छु । आफ्ना सबै परिवारलाई समवेदना पठाउने समय चाहान्छु । श्रद्धाञ्जली !’
अर्जेन्टिनाको टिग्रेस्थित आफ्नै घरमा ‘कार्डियाक अरेस्ट’का कारण उनको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले बताएका छन् । उनलाई मस्तिष्कसम्बन्धी समस्या पनि थियो ।
म्याराडोनाकै नेतृत्वमा सन् १९८६ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अर्जेन्टिनाले जितेको थियो। सन् १९९० को विश्वकप फुटबलमा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो। उनी विश्वकै महान् खेलाडीको रूपमा चिनिन्थे । उनको जन्म सन् १९६० अक्टोबर ३० मा उनको भएको थियो ।
रमेश धमला भन्छन्, ‘रजनी बेचिएको होइन, नेपाल ल्याउने प्रक्रिया चल्दैछ’
दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचार हटाउन जर्मनबाट धम्की : नहटाए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी (पत्रसहित)
ट्रेडमार्क चोरीका अभियुक्त दुगड प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आर्थिक सल्लाहाकार नियुक्त !
तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चेक बाउन्स मुद्दामा फरार रहेका अभियुक्त सिआइबीको फन्दामा !
शंकर ग्रुपद्वारा टिभिएसका मजदुरमाथि ज्यादती : अन्यायपूर्वक २० मजदुर निष्काशन !
Exclusive:: नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमलाद्वारा ‘बालिका बेचेको’ गम्भिर आरोप !
माधव वाग्ले ‘हिमानी’ निर्देशन गर्दै
विजय देवरकोन्डो अब बलिउडमा डेब्यु गदै
शिक्षामन्त्रीले भ्रष्टाचार आरोपीलाई केयूको उपकुलपतिमा सिफारिस गरेको खुलाशा (उजुरीसहित)